Akadzidza Kubva Kuvasungwa kuEritrea
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Basque Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Chol Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Georgian German Greek Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabuverdianu Kamba Kannada Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kongo Korean Lari Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Maya Mingrelian Mongolian Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuMexico Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Niuean Norwegian Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Telugu Thai Tigrinya Tojolabal Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Waray-Waray Welsh Xhosa Yoruba Zulu
Akadzidza Kubva Kuvasungwa
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Akadzidza Kubva Kuvasungwa
Mumwe murume wekuEritrea akatamira kuNorway semupoteri muna 2011. Paakashanyirwa neZvapupu zvaJehovha, akataura kuti akanga atomboona Zvapupu kumusha kwake. Akati paaiva mubasa rechiuto ikoko, akaona Zvapupu zvaiva mujeri pamusana pekutenda kwazvo zvichiramba kumanikidzwa kupinda mubasa rechiuto, pasinei nekubatwa zveutsinye kwazvaiitwa.
Zvinhu zvakangoerekana zvachinja, murume uyu ndokubva aiswawo mujeri. Akabva aiswa maiva neZvapupu zvitatu zvinoti Paulos Eyasu, Negede Teklemariam, uye Isaac Mogos avo vakavharirwa muna 1994.
Ari mujeri, murume uyu akazvionera ega kuti Zvapupu zvaJehovha vanhu vanoita zvavanodzidzisa. Akacherechedza kuti vanhu vakavimbika uye vaitopawo vamwe vasungwa zvekudya zvavo. Vaidzidza Bhaibheri pamwe chete mazuva ese vachikoka vamwe kuti vauyewo. Pavakanzi vasaine pepa raitaura kuti vaisazoshumira Jehovha, vakaramba kunyange zvazvo kusaina kwaizoita kuti vabudiswe mujeri.
Zvinhu izvi zvakamubata-bata, zvekuti paakauya kuNorway aida kunyatsoziva kuti chii chaizvo chaiita kuti Zvapupu zvaJehovha zvive nekutenda kwakasimba zvakadaro. Saka, Zvapupu pazvakamushanyira, akabva angotanga kudzidziswa Bhaibheri nekupinda misangano yavo.
Muna September 2018, akabhabhatidzwa semumwe weZvapupu zvaJehovha. Iye zvino ava kushandisa mikana yese yaanowana kukurudzira vanhu vanobva kuEritrea nekuSudan kudzidza Bhaibheri uye kusimbisa kutenda kwavo.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Akadzidza Kubva Kuvasungwa
ijwex nyaya 7